(FBC) – Manni Maree Ministirootaa walga’ii Ariifachiisaa 2ffaa guyyaa har’aa gaggeesseen turtiin labsii yeroo ariifachiisaa akka gabaabbatu murtoo dabarseera.
Manni Marichaa labsii yeroo ariifachiisaa balaa birmadummaa biyyaarratti aggaamame ittisuuf ba’e lakkoofsa 5/2014 ilaalchisee yaadata murtoo dhiyaateerratti mari’achuun murtoo dabarseera.
Balaa gareen shororkeessaa ABUT fi jaallewwan isaa birmadummaa biyyaarratti aggaaman seera idileen ittisuun waan dadhabameef Manni Maree Ministirootaa Onkololeessaa 23, 2014 Labsii Yeroo Ariifachiisaa lakkoofsa 5/ 2014 labseera.
Labsichi Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf dhiyaachuun labsii lakkoofsa 1264/2014 ta’uun ragga’ee hojiirra oolaa tureera.
Yaa ta’uutii haalli ture jijjiirramuun sadarkaa sodaa birmadummaa biyyaa seera idileen kabachiisuu fi ittisuun danda’amurra ga’amuu isaa hordofee labsii baatii jahaaf labsame yeroo turtii isaa gabaabsuun barbaachisaa ta’ee argamuu Manni Marichaa walga’ii gaggeesseen himeera.
Akkaataa labsii lakkoofsa 1264/2014 keewwata 11 muraa 2 jalatti tumameen Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa labsiin baatii jahaaf labsame yeroon isaa osoo hin xumuramin haalli jiru yoo jijjiirramee fi rakkoo uumama seera idileen kabachiisuu fi ittisuun danda’amnaan yeroo labsichaa gabaabsuuf aangoo akka qabu kaa’ameera.
Yeroo turtii isaa ilaalchisee yaada murtoo dhiyaaterratti manni Maree Ministirootaa mar’achuun erga raggaasiisee booda Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf akka qajeelfamu murteesseera.
Previous MNO, Dargaggoota Oromoo Dogoggooraan Shaneetti Makamaniif Waamicha Dhiyeesse
Next Aanaa Booraatti Miseensonni Shanee Nageenya Booressaa Turan Harka Kennatan